မ်က္ခံုးေတြ ဘာေၾကာင့္လႈပ္တာလဲဆိုတာကို လူတိုင္း ျဖစ္ဖူးၾကမွာပါ…. - ZeeKwat
Home » Gallery » Health » မ်က္ခံုးေတြ ဘာေၾကာင့္လႈပ္တာလဲဆိုတာကို လူတိုင္း ျဖစ္ဖူးၾကမွာပါ….
မ်က္ခံုးေတြ ဘာေၾကာင့္လႈပ္တာလဲဆိုတာကို လူတိုင္း ျဖစ္ဖူးၾကမွာပါ….
မ်က္ကြင္းညိုျခင္းသည္ အေရျပား ျပႆနာေၾကာင့္ မဟုတ္။ အေရျပား တင္းရင္း သိပ္သည္းမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားသျဖင့္ မ်က္လံုးေအာက္က ေသြးေၾကာမ်ားကို လွမ္းျမင္ရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ လူက ပင္ပန္း၊ ခႏၶာကိုယ္က ေရငတ္လာသည့္အခါ အေရျပားသည္ ေရဓာတ္ခန္း ေျခာက္လာသည္။ ထိုသို႔ ေရဓာတ္ခန္း ေျခာက္လာသည္တြင္ မ်က္လံုးေအာက္က အေရျပားသည္ တင္းရင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားသျဖင့္ ေအာက္က ေသြးေၾကာမ်ားကို လွမ္းျမင္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။
မကြျခုံး ခဏခဏ လှုပျနရေငျ ဘာမြားဖွစျမလဲဟု စိတျထငျ့လာတတျသညျ။ မကြျကှငျးတှေ ညိုလာပွီဆို တစျခုခုမြား ဖွစျတော့မလား စိုးရိမျကွသညျ။ အအိပျမြားသှားလြှငျ ကိုယျလကျမအီမသာတှေ ဖွစျပွီး လေးလံထိုငျးမှိုငျး သှားရတာကရော ဘာကွောငျ့လဲ။ လူပငျပနျးလာရငျး ဖွူဖတျဖွူရောျ ဖွစျသှားတာ ကရော အသို့နညျး။
၁။ ဇတျခနဲ ဇတျခနဲ မကြျခုံးလှုပျတာ ဘာကွောငျ့လဲ။
လူသညျ ပငျပနျး နှမျးနယျနသေညျ့အခါ၊ စိတျဖိစီးနသေညျ့အခါ၊ အသောကျလှနျသညျ့ အခါမြိုးတှငျ အာရုံကွောမြား အားနညျးလာတတျသညျ။ မကြျလုံးတစျဝိုကျက ကွှကျသားမြားသညျ နူးညံ့သိမျမှေ့ကွသညျ။ ၎င်းငျးတို့ကို ထိနျးခြုပျသော အာရုံကွောစနစျ အားနညျးပါက လှုပျရှားမှု ဖောကျပွနျတတျပွီး ဇတျခနဲ ဇတျခနဲ ဆောငျ့ပွီး လှုပျရှားတတျကွသညျ။
ထိုသို့ လှုှုပျခွငျးကို မကြျခုံးလှုပျခွငျး (သို့မဟုတျ) မကြျခှံတှေ လှုပျနခွေငျးဟု ဆိုကွခွငျး ဖွစျသညျ။ အိပျရေးဝဝ အိပျလိုကျပွီး လူက လနျးဆနျး အားရှိသှားလြှငျ ထိုသို့ လှုပျနတော အလိုလို ပြောကျသှားသညျ။ အသောကျလှနျလို့ ဖွစျရသူမြား အနဖွေငျ့လညျး အသောကျလြှော့ခွငျးဖွငျ့ ထိုကိစ်စ ပွလေညျနိုငျသညျ။
၂။ အိပျရာနိုးရငျ အာပုပျစောျဘာကွောငျ့ နံ။
အာခွောကျခွငျးကွောငျ့ ဖွစျသညျ။ ပလုတျကငြျးလိုကျရုံ၊ သှားတိုကျလိုကျရုံနှငျ့ အနံ့ပြောကျသညျ။ အိပျနခြေိနျတှငျ တံတှေးထှကျနှုနျး နညျးခွငျး၊ အိမျနစေဉျ ပါးစပျဟကာ အသကျရူခွငျး တို့ကွောငျ့ လဝေငျကာ ပါးစပျထဲက တံတှေးခွောကျ သှားရသညျ။ ထိုသို့ ခွောကျသှားသညျ့အခါ ပါးစပျထဲက ဘကျတီးရီးယားမြား၊ စားကွှငျး စားကနြျမြား ပုပျသိုးခွောကျသှေ့ပွီး ဆာလဖာ ဓာတျထှကျလာသညျ။ အာပုပျစောျသညျ ထိုဆာလဖာနံ့ ဖွစျသညျ။
၃။ မကြျကှငျးညိုတာ ဘာကွောငျ့လဲ။
မကြျကှငျးညိုခွငျးသညျ အရပွေား ပွဿနာကွောငျ့ မဟုတျ။ အရပွေား တငျးရငျး သိပျသညျးမှု လြော့နညျးသှားသဖွငျ့ မကြျလုံးအောကျက သှေးကွောမြားကို လှမျးမွငျရခွငျးသာ ဖွစျသညျ။ လူက ပငျပနျး၊ ခန်ဓာကိုယျက ရငေတျလာသညျ့အခါ အရပွေားသညျ ရဓောတျခနျး ခွောကျလာသညျ။ ထိုသို့ ရဓောတျခနျး ခွောကျလာသညျတှငျ မကြျလုံးအောကျက အရပွေားသညျ တငျးရငျးမှု လြော့နညျးသှားသဖွငျ့ အောကျက သှေးကွောမြားကို လှမျးမွငျလာရခွငျး ဖွစျသညျ။
ထိုအခါ အပွငျက ကွညျ့လိုကျလြှငျ မကြျကှငျးသညျ ညိုမညျးနညျး ဖွစျနတေော့သညျ။ အရပွေား ခွောကျသှေ့ပါ မြားသူတို့သညျ မကြျကှငျး ပိုညိုမညျးတတျကွသညျ။ အဲကှနျး သို့မဟုတျ အနှေးပေးစကျမြိုး နားနပေါ မြားသူတို့သညျ အရပွေား အစိုဓာတျခနျး ခွောကျကာ မကြျကှငျး ပိုညိုလေ့ရှိသညျ။
၄။ အိပျလှနျးရငျ ကနြျးမာရေး ထိခိုကျနိုငျလား။
လေးကနျထိုငျးမှိုငျး ကိုယျလကျ မအီမသာနဲ့ နိုးလာလြှငျ အိပျရေးမဝလို့ဟု မထငျပါနဲ့ ။ ပိုအိပျမိခွငျးကွောငျ့သာ ဖွစျပါသညျ။ အိပျရေးမဝဘဲ နိုးလာပါက လူသညျ အိပျရေးမဝသေးဘူး ဆိုတာ အလိုလို သိနပွေီး ပွနျအိပျခငြျစိတျက အလိုလို ပေါျနသေညျ။
အအိပျလှနျလို့ နုံးခြိပွီး နိုးလာသူကား အိပျရေးမဝစိတျ၊ ပွနျအိပျခငြျစိတျမြိုးမပေါျ၊ နုံးခြိလေးကနျ စိတျသာ ပေါျနသေညျ။ ထိုသို့ ဖွစျရခွငျးမှာ အအိပျလှနျပွီး နမွေငျ့မှ နိုးသူမြားသညျ ခန်ဓာကိုယျ ဇီဝနာရီစနစျ စညျးခကြျ ပကြျအောငျ လုုပျရာရောကျသောကွောငျ့ အကြိုးဆကျအဖွစျ လူသညျ ပုံမှနျလညျပတျမှု ပကြျယှငျးကာ နုံးခြိ ပငျပနျးနတေော့သညျ။
မိမိအိပျခြိနျမြားလား နညျးလားကို မိမိဖာသာ အကဲဖွတျရမညျ။ လူတစျယောကျနဲ့ တစျယောကျ အိပျခြိနျ လိုအပျပုံခငြျး ကှဲပွားသညျ။ ပမြျးမြှအားဖွငျ့ ခွောကျနာရီမှ ကိုးနာရီကွား အိပျစကျခွငျးသညျ ပုံမှနျ အိပျခြိနျစံနှုနျး ဖွစျသညျ။ ခွောကျနာရီ အိပျရုံနဲ့ အိပျရေးဝ လနျးဆနျးသူမြား ရှိသလို၊ ကိုးနာရီလောကျ အိပျရမှ လနျးဆနျးသူမြားလညျး ရှိသညျ။ ခွောကျနာရီထကျနညျး၊ ကိုးနာရီထကျ မြားလြှငျတော့ ကနြျးမာရေး ထိခိုကျသညျ့ဘကျကို ရောကျသှားပွီ။
၅။ ပငျပနျးလာရငျ မကြျလုံးတှေ ဘာကွောငျ့ ရဲလာတာလဲ။
လူက လုပျစရာတှမြေား၊ ဖိစီးမှုတှမြေားပွီး အလုပျတှနေဲ့ လုံးပမျးကာ ပငျပနျးနုံးခြိလာပွီဆိုလြှငျ မကြျတောငျခတျဖို့ မေ့တတျသညျ။ ဦးနှောကျ ကိုယျတိုငျက အခွားဖိစီးမှု တှေ မြားလာသညျ့အခါ မကြျတောငျခတျဖို့ မေ့တတျသညျ။ မကြျတောငျခတျခွငျးသညျ အရေးကွီးသညျ။
မကြျတောငျခတျပါမှ မကြျရညျမြားသညျ မကြျလုံးအနှံ့ ရောကျရှိကာ မကြျလုံး စိုစှတျနသေညျ။ မကြျတောငျခတျဖို့ မေ့နသေညျ့အခါ မကြျလုံးတှငျ မကြျရညျခွောကျခနျးပွီး မကြျလုံးထဲက ဆံခွညျမြှငျ သှေးကွောလေးမြား ရောငျရမျး ဖောငျးတကျလာတော့သညျ။ ထိုသို့ ဖွစျခွငျးကို မကြျလုံးတှေ နီရဲလာခွငျးဟု ခေါျသညျ။
မကြျျရညျခွောကျလာသညျ့ အခါ မကြျလုံးသညျ ဖုနျပိုကပျပွီး ယားလာတတျသညျ။ ထိုအခါ လူသညျ လကျနဲ့ ပိုပှတျမိပွနျသညျ။ ထိုသို့ ပှတျသညျ့အခါ